यौनको कमाई | Kamsastra
Sex, नेपाली यौन कथा, यौनको कमाई, रन्डीसँग,
आफू जवान भइसकेकोमा म विश्वस्त भइसकेकी थिएँ । किनकी मैले दुई वटा पुरुषसँग यौन सम्पर्क गरिसकेकी थिएँ । अनि सेक्सको मजा पाइसकेकी थिएँ ।मेरो रहनसहन र फेशनमा सोही अनुसार परिवर्तन भइसकेको थियो । बाटोमा हिँड्दा पुरुषको दृष्टि आफूमा परेको देख्दा मलाई आनन्द र गर्व लाग्थ्यो । उनीहरु मलाई तलदेखि माथिसम्म लोभिएर हेर्नेगर्दथे । सायद उनीहरु मसँग नजिक हुन चाहन्थे । मसँग यौन प्यास मेटाउनु उनीहरुको धोको हुने गर्दथ्यो होला ।एक दिन मेरी साथी दीपालाई भेट्न म सिमरा गएँ । धेरै दिन भइसकेको थियो हामीबीच भेट नभएको । उसको कोठामा बसेर हामी रमाइला कुरा गर्दैथ्यौं । उसलाई रश्मी भन्ने साथीले फोन गरेकी छ भन्दै उसको ममी बोलाउन आउनु भयो । हामी एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएकाले उसका सबै साथी मेरा पनि साथी थिए । तर रश्मी नाम गरेको साथी मैले चिन्न सकिनँ । फोनमा कुरा गरिसकेर ऊ फर्किएपछि उसलाई मैले सोधेँ, 'रश्मी भनेको को हो ?'उसले मेरो प्रश्नको जवाफ नदिइकनै टार्ने कोसिसमा भनि- 'छाड्दे न यार ।' मलाई उसको कुराले चित्त बुझेन । अनि सोधेँ, 'मैले नचिन्ने पनि तेरो साथी छन् र ?' तर पनि उसले रश्मीको बारेमा राम्ररी भनिन ।
मैले कर गरेरै सोधेँ- 'भन न को हो ? मैले चिन्नु नहुने हो र ?'अनि उसले भनि, 'सीमराकै एक आइमाइ हो, कोही गेस्ट आएको छ रे । त्यही भएर एक घण्टामा आउनु भनेर बोलाएकी ।' छक्क मान्दै मैले फेरि सोधेँ, 'उसको गेस्ट आउँदा तलाई किन बोलाउनु पर्‍यो ?' उसले मलाई सबैकुरा नबताइ सुखै पाइन ।अनि भनि, 'एउटा गेस्टसँग बसेर ३-४ घण्टा बिताउँदा ५ हजार पाइन्छ यार । आफूलाई पनि मज्जा, अनि पैसा पनि हुने ।'उसको जाने बेला भइसकेको थियो । उसले भनि 'बरु हिडँ, तलाई पनि म चिनाइदिन्छु ।' मलाई उसको कुराले दोधारमा पार्‍यो । उसको घरबाट सँगै निस्कियौं तर बाटोमा उसले धेरै कर गरेका कारण म पनि ऊसँगै गए ।गाउँबाट अलि पर एक तले एउटा घरमा हामी पस्यौं । पाँच कोठे सो घरको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ एउटी आइमाइ र दुइ पुरुष देखियो । अरु कोठा बन्द थिए । ती पुरुषले बियर पिइरहेका थिए । अनि आइमाइ चाँही मासु चिउरा खाँदैथिइ ।'बस दीपा । ऊ को हो नी ?' आइमाइले सोधी । दीपाले जवाफ दिइ- 'यो मेरो साथी हो, कबिता ।' हामी एकातिरको सोफामा बस्यौं । मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो । सामुन्ने बसेका दुइ पुरुषले मलाई र दीपालाई पालैपालो गिद्दे नजर लगाइरहेका थिए ।'केही खाने हो ?' आइमाइले हामीतिर हेर्दै सोधी । 'भर्खर खाना खाएको, भै गो केही नखाउँ,' दीपाले भनि । यत्तिकैमा एउटा पुरुषले भन्यो, 'चिसो लिए भइहाल्छ नि, कुल भएर बस न ।'आइमाइ जुरुक्क उठेर पल्लो कोठामा गइ दुइवटा कोक लिएर आइ । 'ऊ पनि मेम्बर नै हो ?' आइमाइले मतिर इशारा गर्दै दीपासँग सोधि । अनि दीपाले भनि, 'होइन, मेरो घरमा आएकी थिइ अनि यहाँसम्म मसँगै आएकी ।''कुरा मिले मेम्बर बनाए भइहाल्छ नि,' अर्को पुरुषले भन्यो । अनि दीपालाई त्यो आइमाइले पल्लो कोठामा लिएर गइ । म ती दुइ पुरुषसामू एक्लै भएँ । उनीहरुको मुखमा हेर्न सकिरहेकी थिइनँ । 'किन लजाएको ? लाज मान्नु पर्दैन, हामी पनि मान्छे नै त हौं नि,' एउटाले भन्यो । 'हैन,' मैले यतिमात्र भने ।उनीहरुले बियर सिध्याए । उता दीपा र त्यो आइमाइ पनि भित्र छिरे । अनि दीपाले मलाई भनि, 'काम सकेर सँगै फर्किउला हुन्न ?''हैन म जान्छु,' उठ्न खोज्दै मैले भने । तर आइमाइले मलाई बसाउँदै भनि, 'बस न, के हतार ?' दीपाले पनि थपि, 'बस् बस् । सँगै जाउँला । एक-दुइ घण्टा त हो नि । घर बेलुकासम्म पुगे भइहाल्छ नि । आखिर घरमा मेरो घर जाने भनेरै आएकी होलिस् ।'मेरो कुनै जवाफ नै नसुनी दीपाले नै भनि, 'बस्छे बस्छे ।'अनि ती केटाहरु उठे । 'हामी उता पट्टी कोठामा गयौं है त,' त्यो आइमाइलाई उनीहरुले भने । उसले पनि मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भनि ।'तिमीहरु दुबै जना जाने हो त ? कुरा मिलाउँ ?' दीपालाई उसले सोधी । दीपा मेरो मुखमा हेर्न थाली । मैले केही भनिन । अनि जोसिदै दीपाले भनि, 'हिड् यार, आज मेरो मुड पनि थिएन, त्यसमा पनि डबल दिन गाह्रो लागिरहेको थियो, एउटालाई तँ सम्हाल ।' मलाई तानेर उसले ती केटाहरु भएको कोठामा लगि ।अनि ऊ ती केटासँगै पलङमा बसी । एउटाले दीपालाई सुम्सुम्यायो । अर्कोले दीपाको मुहार समातेर ओठमा चुम्बन गर्‍यो । 'छ्या.. बियर ह्वास्स गन्हायो,' दीपाले भनि । 'यस्तै हो डार्लिङ, सेक्स पावर बढाउनु परेन त ?' उसले जवाफ दियो ।अनि अर्कोले मतिर संकेत गर्दै भन्यो, 'बस न । किन उभिरहेकी ?' दीपाले पनि भनि, 'आइज न भन्या, बस ।' अनि अर्को केटाले भन्यो, 'ठिकै छ नि, पहिला तिमी अनि उसको पालो ।' दीपाले उसलाई सोधी, 'डबल नै गर्ने हो र ? सिंगल-सिंगल हुन्न ?'अनि त्यो केटाले भन्यो- 'दुबैलाई डबल नै गरौंला नि ।''लौ न, झन् सिंगल-सिंगल भनेर यसलाई समेत मनाएको त, मैले डबल गरेकै छैन क्या । डर लाग्छ ।' दीपाले भनि । अर्को केटाले भन्यो, 'आज डबलको मजा पनि चाख न त ।'एउटा केटा मतिर आएर मलाई एउटा खाटमा बसायो । 'तिमी यहीँ बसेर अहिले आनन्द लिइराख । पहिला उसको काम सकौं है त ।'अनि ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थाल्यो । अनि अर्कोले दीपाको लुगा खोल्यो । क्षणभर मै दीपा नाङ्गो भइसकेकी थिइ । उसले आफूसँगै नाङ्गिएको केटोको तलदेखि माथिसम्म हेरि । अनि पलङमा खुट्टा तल झार्दै बसी । अर्को केटाले पनि लुगा खोल्न थाल्यो ।पहिलो केटाले दीपाको त्रि्रा सुम्सुम्यायो । अनि मुखमा म्वाइ खायो । दोस्रोले आफ्नो लिंग समातेर दीपाको स्तनमा दल्यो । 'अहिले नै फोहोर नपार न यार, एक छिन मजा लुट्न दे न ।' अर्को केटाले भन्यो ।'मजा लुट्न अर्को माल सिंगै छँदैछ नि ।' पहिलोले भन्यो । अनि दीपाको दु्ध च्याप्प समात्यो । दोस्रोले पुती मुसार्न थाल्यो । दीपाको शरीरमा हलचल भइरहेको थियो । ऊ के गरौं र कसो गरौं भन्ने गरी यताउती शरीर मर्काइरहेकी थिइ ।यत्तिकैमा एउटाले आफ्नो लिंग दीपाको मुखमा दल्यो । मलाई घिन लागिरहेको थियो । दीपाले मुख बन्द गरिरहेकी थिइ । तर त्यो केटाले दीपाको ओठमा लिंगको टुप्पो दल्यो । अनि दीपाको सामुन्ने उभिएर मुखमा लाडो राख्दै ठेल्न थाल्यो । दीपाले अझै मुख खोलेकी थिइन ।अनि अर्को केटो पलङमा चढ्यो र दीपालाई आफूतिर तान्यो । उसले दीपालाई हात घुँडा टेकाएर पशुझैं राख्यो । अनि अर्कोले दीपाको मुखमा लाडो दलिरह्यो । पछाडीपट्टी रहेको केटोले दीपाको पुतीतिर लाडो ठेलिरहेको थियो तर बीचमा दीपाले भनि, 'ऐया, अर्कोमा छिर्‍यो, प्वाल हेरेर त छिराउनु नि ।' तर त्यो केटाले भन्यो, 'छिराएकै यसैमा हो नि मैया ।' दीपाले भनि, 'त्यसमा त नाइँ... हुँदैन ।'म छक्क परेँ । सायद त्यो केटाले दीपाको चाकमा छिराइरहेको छ । यत्तिकैमा उसले लाडो निकाल्यो र छेउमा रहेको एउटा सीसीबाट कुनै झोल आफ्नो हातमा झार्‍यो अनि लाडोमा दल्न थाल्यो ।एकछिनमा ऊ फेरि दीपाको पछिल्तिरबाटै लाडो सोझ्याउँदै ठेल्न थाल्यो । दीपा झस्किइ । 'के गर्‍या भन्या..? त्यसमा नगर्नुस् न । अर्कोमा छिराउनु ।' अनि उसले भन्यो, 'इङ्गलिस स्टाइल भनेर सात हजार दिएको छु मैया । धेरै नाटक नगर ।'उसले छोडेन । अनि अघिल्तिरकोले पनि दीपाको मुख खुलेको मौका छोपेर लाडोलाई मुखभित्रै हुलिदियो । दीपा 'उँ...उँ..' गर्दैथिइ । अगाडीको केटाले उसको टाउको समातेर लाडोलाई भित्र बाहिर गरिरहेको थियो । पछाडीपट्टीको केटाको चाँही के मिलेको थिएन कुन्नि ? अलमल गरिरहेको थियो । उसले लाडोमा फेरि त्यो झोल दल्यो अनि दीपाको चाकमा पनि अलिकति दल्यो ।त्यसपछि घुँडा टेकेर उसले पनि लय समात्यो । दीपाले छट्पटाउँदै भनि, 'नाइ ममी, म सक्दिन । दुख्यो.. त्यसमा नगर्नुस् ।' त्यो केटोले भन्यो, 'मैले तेल दलेको छु । केही हुँदैन । एक छिन सहेर बस न ।'म त्यहाँको दृष्य देखेर भयभीत भइरहेकी थिएँ । पछाडीपट्टीको केटालाई अझै अप्ठेरो भइरहेको रहेछ क्यार उसले आफ्नो साथीलाई भन्यो, 'तँ पलङमा सुतेर काम गरा न, म त्यताबाट गर्छु'अनि उनीहरुले आसन फेरे । एउटा केटो उत्तानो परेर सुत्यो अनि उसले आफ्नो लाडो दीपालाई चुसाउन थाल्यो । हात र घुँडा टेक्दै पशुसरी बसेकी दीपाको चाकमा अर्कोले भुइँमै उभिएर लाडो छिराउन थाल्यो । अब भने मैले पनि दीपाको चाक राम्ररी देख्न पाएकी थिएँ । त्यो केटोले दीपाको चाकमा औंला पसायो । अनि केही खोतलेजस्तो गर्‍यो । चाकको प्वालमा बेस्सरी खोतल्यो, दुबैतिर हात राखेर फट्यायो । भित्रको रातो भाग देखिन्थ्यो । अनि उसले चाक च्यात्दै लाडोको टुप्पो छिरायो ।दीपाले चाक हल्लाइ । सायद उसलाई दुखेको हुनु पर्दछ । तै पनि उसले अर्को केटाको लाडो चुस्न छाडेकी थिइन । मैले सोचेँ ऊ सात हजार रुपयाँका लागि त्यत्रो संघर्ष गरिरहेकी छ । अनि कल्पना गरेँ, 'मेरो पनि यस्तै हालत हुन्छ होला । म त यस्तो गर्न दिन्न । गराइ हाले पनि दीपाले भने झैं बरु पाँच हजारमात्र लिन्छु, चुस्ने र चाकमा छिराउने काम गर्न दिन्नँ ।'दीपाको चाकमा त्यो केटाले बिस्तारै बल लगायो । दीपाले अर्को केटाको लाडो मुखबाट निकाल्दै पीडा भरिएको आवाजमा भनि, 'ऐया ममी..., दुख्यो... आइ....।' तर उसले लाडोलाई त्यहाँबाट निकालेको थिएन । बरु एकछिन रोकेर फेरि ठेल्न थाल्यो । 'मरे...बा । दुख्यो ...' दीपा उठ्न खोज्दै थिइ तर उसले दीपाको कम्मर दुबै हातले समात्यो र अर्को केटाले दीपालाई अँगालेर उठ्न दिएन । सुतिरहेको केटाको छातीमा दीपाको स्तन अडिएको थियो । अनि दीपाको अनुहार चाँही उसकै कुममा घोप्टिएको थियो, अनि पछाडीतिरको केटाले लाडोलाई बल लगाएर ठेल्यो । दीपा चिच्याइ, 'नाइ... मरे....।'त्यो केटाले लाडो निकाल्यो । दीपाको चाक त ह्वाङ्ग भएको थियो । उसको चाकको मुख 'आँ' परेको थियो, भित्रको केही भाग देखिन्थ्यो । अनि त्यही मौकामा उसले चाक भित्र औंलाले तेल दल्यो र आफ्नो लाडोमा पनि राम्ररी दल्यो । ऊ फेरि पुरानै काममा लाग्यो । आफ्नो हातले च्याप्प लाडो समाएर दीपको चाकमा सोझ्यायो अनि ठेल्यो ।'आमा... मरेँ ।' दीपाको आवाजमा पीडा स्पष्ट गुञ्जियो । हेर्दाहेर्दै उसको लाडो स्वात्त छिर्‍यो । 'नाइँ.. दुख्यो...।' दीपाले करुणादायी स्वर निकाली । उसले लाडो स्वात्त बाहिर निकाल्यो, दीपाको चाक हृवाङ्ग परेको थियो । अनि उसले फेरि लाडो छिरायो । यसो गर्दा गर्दै उसले लाडोलाई भित्रबाहिर गरि दनादन पेल्न थाल्यो । उसको पेलाइसँगै आवाज निस्किरहेको थियो, 'प्वाक.. प्वाक..।'एकछिन पछि ऊ स्थिर भयो । अनि तलतिर रहेको केटाले पनि पुतीतिर लाडो सोझ्यायो । अब त दीपाको दुबै प्वालमा लाडो खाँदियो । 'ऐया.., ऐया...' दीपाको आवाज निस्किरहेको थियो ।केटा मान्छेलाई प्वाल भए पुग्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो । चाक पनि बाँकी राख्दा रहेनछन् । दीपा पछि मेरो पालो निश्चित थियो । उसको दर्ुदशा देखेर मैले त्यस्तो सहन सक्ने आँट गरिनँ । उनीहरु आफ्नो काममा व्यस्त रहेको मौका छोपी म बाहिर निस्कनका लागि ढोका खोल्न पुगेँ । तर बाहिरैबाट ढोका बन्द गरिएको रहेछ । ती केटामध्ये एकले मतिर हेर्दै भन्यो, 'हामीले नभनि अब ढोका खुल्दैन रानी ।'चाकतिर हुलिरहेको केटाले केहीबेरमा लाडो झिक्यो र हातले खेलायो । उसको लाडोबाट बिर्यको फोहोरा छुट्यो दीपाको ढाडमा । दीपाले बीर्य खसेको ठाउँमा हात लगि, उसको हातभरी लाग्यो । उसले तन्दामा हात दली । अनि उत्तानो परेको केटाले दीपालाई सर्लक्क पल्टायो र आफू दीपामाथि घोप्टिएर दनादन पेल्न थाल्यो । दीपा उँ.. उँ.. गर्दै थिइ । केही बेरमा ऊ पनि शान्त भयो । उसले चाँही दीपाको पुतीमै बीर्य झार्‍यो । 'आमै..भित्रै झारेको ?' दीपाले भनि । केटो केही बोलेन ।अनि ती केटाहरु पलङमा पल्टिएर सुस्ताउन थाले । सायद उनीहरु निकै थाकेका थिए । मैले सोचेँ यिनीहरुलाई अब पुगिसक्यो । मलाई त्यसै छोड्लान् ।तर मेरो सोचाए गलत रहेछ । टेबलमा रहेको पmुटी खाँदै एउटाले भन्यो, 'आउ न मैया, यता बस ।' म आफ्नै ठाउँमा बसिरहेकी थिए । अर्कोचाँही जुरुक्क उठेर मतिर आयो र मलाई च्याप्प समातेर उही पलङमा पुर्‍यायो । दीपा पनि लखतरान भएर पल्टिरहेकी थिइ ।दुबै केटा मिलेर मलाई नांगै बनाउन थाले । उनीहरु ममाथि यसरी झम्टिए कि मानौं उनीहरु भोको बाघले बाख्रा भेटेझैं देखिन्थे । म निकै डराएँ । एउटाले योनी मुसार्न थाल्यो, अर्कोले मेरा दुध सुम्सुम्यायो । दीपा बेलाबेलामा मलाई हेर्थी । दीपाको हालत राम्ररी देखिसकेको हुनाले मैले ती केटाहरुको प्रतिवाद गर्न खोज्नु बेकार थियो । उनीहरुमा दया, माया थिएन ।एउटाले मेरो दुध बेस्सरी चुस्यो, मासु नै लुछिएला जस्तो भयो । 'दुख्यो, बिस्तारै गर्नुस् न ।' मैले भनेँ । 'पोटिलो छ यार,' उसले दुध चुस्दै भन्यो । अर्कोले दुबै हातले पुती च्यात्दै भन्यो, 'यो पनि टाइट नै छ त यार ।'अनि पुती च्यात्दै गरेको केटो जुरुक्क उठ्यो र आफ्नो साथीलाई भन्यो, 'यार यसलाई टेस्ट गरौं न, एक छिन मलाई फ्री छोड त ।' अर्को केटाले उसको आदेश मान्दै मलाई छोड्यो । त्यसपछि उसको साथीले मलाई उत्तानो पारेर सुतायो । उसले मेरा दुबै तिघ्रालाई आफ्नो काँधमा चढायो र घुँडा धसेर बस्दै आफ्नो लाडोलाई मेरो पुतीमा जोड्यो । अनि उसले भित्र ठेल्न थाल्यो । 'वाह, टाइट छ यार ।' उसले भन्यो । 'खै.. म पनि टेस्ट गरौं न,' अर्कोले भन्यो । अनि पहिलो केटोले सरक्क आफ्नो लाडो झिम्यो । दोस्रोले पनि मलाई उही आसनमा राख्दै आफ्नो लाडो पसाउन थाल्यो । 'हो त यार.. यो पो प्वाँट रहिछ ।' अनि उसले लाडोलाई बिस्तारै गहिराईमा ठेल्यो । 'ओह.. ' मेरो मुखबाट आवाज निस्कियो ।उसमा जोश आइसकेको थियो, म पनि भयमिश्रति जोशमा नै थिएँ । 'च्याप्प समातेको छ यार, टाइट रहेछ,' उसले लाडो ठेल्दै भन्यो । अनि फटाफट पेल्न सुरु गर्‍यो । 'स्वाट स्वाट पेल्दा मलाई पनि आनन्द लागि रहेको थियो । मलाई कुनै बेला दुखेजस्तो पनि भइरहेको थियो । अनि आफ्ना हातले उसलाई पछाडी ठेल्थेँ, तर उ भने मलाई जोडले समातेर फटाफट आफ्नो काम गरिरहेको थियो । तीन चार मिनेटसम्म यो क्रम चलिरह्यो । त्यतिबेला मलाई पोल्न थालिसकेको थियो । उसको गति पनि निकै बढिसकेको थियो । 'भयो.. भयो...' मैले भनेँ । उसले छोडेकै थिएन । बरु अर्कोचाँहीले मेरो दुधमा मुन्टो जोत्यो । अनि दुबै दुधलाई पालै पालो चुस्न थाल्यो । मलाई चिकिरहेको केटा केही बेरमा मेरो जिउ नै सिरिङ्ग हुने गरी लम्पसार पर्‍यो । उसले आफ्नो बिर्य झारिसकेको थियो ।मैले राहतको सास फेरेँ । तर अर्कोले मेरो पुती रुमालले पुछ्न थाल्यो । 'साला.. सबै भित्रै पो झारेछ,' उसले भन्यो । अनि उ तम्सियो ममाथि । मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भनेँ, 'नाइ.. अब नगर्नुस् प्लीज.. म सक्दिनँ ।' तर ऊ किन मान्थ्यो र ? मेरा खुट्टा फट्याएर लम्पसार पर्दै उसले छिराउन थाल्यो । यस पटक मलाई साह्रै गाह्रो भयो । 'नाइ भन्या.. दुखिरहेको छ, मलाई छोड्नुस् प्लीज..।' मैले भनेँ । अनि त्यो केटाले आफ्नो साथीलाई भन्यो, 'ओइ यसको मुख बुझो लगा त..।' त्यसपछि अर्को केटो मेरो मुखतिर आएर आफ्नो लाडो झुन्ड्याउन थाल्यो ।उसले मेरो ओठमा लाडो दल्यो । चिसो लाडो देखेर मलाई सिकसिको लाग्यो । मैले आँखा चिम्लिदै भनेँ, 'म यस्तो काम गर्दिन, छोड्नुस् भन्या ।' तर उसले मेरो दुबै गाला एकै हातले दबाउँदै मुख खोल्यो र लाडो पसायो । रसाइरहेको उसको लाडो मुखभित्र छिरिसकेको थियो । मेरो मुखभरी थुक जम्मा भयो, त्यो पनि चिप्लो । उसले मुखमा लाडो कोचेको कोच्यै गर्‍यो । अर्कोले फटाफट पुतीमा पेलिरहेको थियो । मैले आफ्नो शरीर पूर्णरुपमा उनीहरुलाई सुम्पिनुको कुनै बिकल्प थिएन । अनि मैले कुनै प्रतिवाद नै नगरी आफ्नो पीडा जसरी भए पनि सहन निधो गरेँ । 'मरेँ ममी.. मलाई मार्‍यो ।' मनमनै भनिरहेँ तर मेरो मुखबाट आवाज निस्किन सकेको थिएन किनकी मुखभरी उसको घोर्ले लाडो कोचिएको थियो ।अनि पुतीमा पनि उस्तै मोटो मुस्लो उफ्रीरहेको थियो । म छट्पटाउन थालेँ, उनीहरु शिथिल हुने प्रतिक्षामा म सहँदै गएँ । तर उनीहरु झन् चम्किरहेका थिए । हुँदा हुँदै मलाई चिक्ने केटा उठ्यो । अनि उसले मेरा तिघ्रालाई काँधमा राखेर बेस्सरी समात्दै मेरो चाक केही उठायो । अनि टुक्रुक्क उभिएर चिक्न थाल्यो । नाभीतिरै उसको लाडो धसिएको थियो । धेरै कष्ट सहिसकेपछि उसले पनि पुतीभित्रै आफ्नो रस खसाल्यो । त्यसपछि मनमनै उनीहरुलाई सराप्दै म उठेँ ।त्यो आइमाईबाट ७-७ हजार रुपयाँ लिएर हामी निस्कियौं । बाटोमा केहीबेर त दीपा र म बीच बोलचालै भएन । अनि पछि मैले नै भनेँ, 'तैले गर्दा आज यस्तो सास्ती खेप्नु पर्‍यो ।' उसले भनि, 'सालाहरु यस्तो रन्किएका छन् भन्ने के थाहा ? यसरी दुइटालाई कहिल्यै सम्हाल्नु परेको थिएन ।'"तलाइँ त अझ ठाउमै मात्र गरेका छन्, मेरो त चाक पनि बाँकी राखेनन् सालाहरुले," दीपाले भनि । हुन पनि उसलाइ त चाक नै च्यातिनेगरी पो छिराएका थिए त । "तर मैले पनि दुइटालाइ पो थेगेँ त," मैले भनि । "राँडाका छोराहरुले भित्रै झारिदिए, त्यो पो टेन्सन छ त," दीपाले भनि । "किन र ?" मैले सोधेँ । आमा बनिएला भनेर नि जाँठी, त्यति पनि बुझ्दिन ।" उसले भनि । अनि पो मेरो सात्तो गयो । मैले त तीनै पटक अरुको बिउ भित्रै लिएकी थिएँ ।
Labels: Sex, नेपाली यौन कथा, यौनको कमाई, रन्डीसँग